Madaxweyne Farmaajo oo ka baaqdey kulanka Qaramada Midoobey [ Sabab]
MUQDISHO - Madaxweynaha dowlada Federalaka Soomaaliya Maxamad Cabdulahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu ka baaqdo kulanka 73aad ee golaha guud Qaramada Midoobey kaasoo si rasmiya uga furmaya 25 September,2018 magaalada New York.
Qoraal lagu daabacey barta Twitter Wasaarda arimaha dibada dowlada Federaalka ah ayaa lagu sheegtey in Wasiir Axmad Cawad hogaamin doono wafdi u ambabaxaya magalada New York isagoo halkaas ka jeedin doona khudbad uu ku matalayo Madaxweyne Farmaajo.
Lama oga sababta baqashada safarka Madaxweynaha balse waxay ku Soo beegmeysaa xilii magalada Muqdisho ka jiraan xaalado siyasadeed iyo kuwo amni kuwasoo sababi kara inuusan Farmaajo aadin New York.
Qoraal saaka goor hore kasoo baxay xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegey inuu kulan deg deg ah isugu yeerey madaxda Galmudug xilli weli taagan yahay khilaafkii u dhexeeyey maamulada Soomaalida iyo dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dhinca kale xildhibaano ka tirsan aqalka wakiilada Soomaaliya ayaa xereeyey mooshin ay ku dalbanayaan in RW Khayre horyimado golaha si wax looga weeydiiyo arimaha amniga ee lagu eedeynayo in xukuumadiisu ku fashilantey.
RW Khayre iyo Madaxweyne Famemaajo oo kaashanaya Gudoomiyaha Barlamanka ayaa ka shaqeynaya sidii dalabka Xildhibanada loo baajin lahaa iyadoo lagu badalayo in guddiga amniga wareysi ugu tagaan wasiirka Kowaad kadib warbixin dib ugu soo celiyaan warbixin golaha.
Magalada Muqdisho ayaa maalintii shalay waxaa lagu diley gabar ardeyad ah oo la sheegey iney ka tirsaneyd si qaraoodi ah hay’adda sirdoonka Soomaaliya taas oo kooxaha argagixisada ah heleen xog la xiriirta shaqadeeda.
NiSA ayaa lagu eedeeyey iney dhexgaleen maamulkeeda kooxaha argagixisada ah kuwasoo ka haya xilal kala duwan hay’adaas.
Fahfaahin ku saabsan socdaalka wafdiga Talyaaniga ee Soomaaliya
Soomaliya 09.04.2019. 00:51
Madax sare oo kamid ah dowladda ayaa ku qabiley caasimadda Wasiirka difaaca Talyaaniga.
Soomaaliya iyo Kenya oo kawada hadlay muranka Xadka [Sawirro]
Soomaliya 29.03.2018. 14:10
Kenya oo warbixin cusub kasoo saartey dhismaha Derbiga Xadka Soomaaliya
Soomaliya 17.11.2018. 11:50
Khayre oo magacaabey Wasiir cusub oo bedelay Cabdifitaax Geesey
Soomaliya 17.12.2018. 11:04
CC Shakuur: Farmaajo tanaasulka ayuu daciifnimo u qaatay, waana nacasnimo
Soomaliya 10.12.2018. 18:42
Mursal oo ku wajahan Baydhabo kadib kulankii Farmaajo iyo Khayre
Soomaliya 04.12.2018. 18:48
Farmaajo oo Rome kula kulmay dhigiisa Talyaaniga
War Saxaafaded 22.11.2018. 09:45
Soomaliya 14.11.2018. 23:36